Feno herintaona, anio… : ”Kidnapping an’i Arnaud sy i Annie”, mbola manjavozavo ny raharaha | NewsMada
Feno herintaona, anio… : ”Kidnapping an’i Arnaud sy i Annie”, mbola manjavozavo ny raharaha
Par Taratra sur 11/01/2017
11 janoary 2016 – 11 janoary 2017. Feno herintaona katroka, anio, ny nahavotsotra soa aman-tsara an’i Arnaud, ilay tovolahikely nalain’ny jiolahy an-keriny, tany Toamasina, ny volana novambra 2015, raha maty novonoina tamin’ny fomba feno habibiana ny anabaviny, i Annie. Mbola manjavozavo anefa ity raharaha nitana ny sain’ny maro ity ankehitriny.
Feno herintaona katroka, anio, ny mamotsoran’ireo jiolahy mpaka an-keriny an’i Arnaud, zanaka mpandraharaha iray tao Toamasina. Nahatratra 70 mahery ireo olona voarohirohy tamin’ity raharaha ity sady efa nalaina am-bavany rahateo koa. Nahitana mpitandro filaminana, mpitsara, mpiasan’ny fadintseranana, mpiasam-panjakana maro sy olon-tsotra, teo koa ireo jiolahy maty voatifitry ny polisy. Hatramin’izao, manjavozavo tanteraka ny momba ity raharaha fakana an-keriny ity. Marobe ireo olona efa voatonontonona ho mpiray tsikombakomba sy tompon’antoka tamin’ity raharaha fakana an-keriny an’i Arnaud sy i Annie ity. Nisy ireo naiditra am-ponja tao Ambalatavoahangy taorian’ny fisamborana azy ireo. Teo koa ny fisian’ilay vehivavy antsoina hoe Stephanie, voarohirohy tamin’ity raharaha ity, saingy nomen’ny fitsarana fahafahana indray izy sy ny namany taty aoriana.
Tsiahivina fa 50 andro taorian’ny naka an-keriny azy mianadahy ireo, ny 23 novambra 2015, avotry ny polisin’ny UIR sy ny Fip tao Andranomadio Toamasina i Arnaud. Novonoin’ireo jiolahy kosa i Annie anabaviny.
Fitaovam-piadiana mahery vaika…
Nampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika ireo jiolahy tompon’antoka tamin’ity fakana an-keriny ireto ankizy mianadahy ireto ity. Basy Kalachnikov sy grenady no nampiasain’ireo jiolahy nandritra ny fotoana nakana an-keriny azy mianadahy. Tsy mbola misy mangirana, araka izany, ny momba ny fanadihadiana hoe avy aiza marina ny tobi-miaramila nivoahan’ireo fitaovam-piadiana ireo. Mafy vava samy tsy mety miteny rahateo ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny fibaikoany ny fitandroana filaminana ao Toamasina. Afenina ao ambadiky ny hoe efa mandeha ny fanadihadiana momba ity raharaha ity ka ho fantatra tsy ho ela ny marina rehetra. Nahatratra hatrany amin’ny 1,5 tapitrisa euros ny vola notakin’ireo andian-jiolahy mpaka an-keriny tamin’ny ray aman-drenin’izy mianadahy.
Niakatra tribonaly hatramin’ny mpanao gazety…
Voasaringotra tamin’ity raharaha ity ny namana mpanao gazety iray eo am-panaovana ny asany. Anisan’ny raharaha fakana an-keriny nahabe resaka teto amin’ny firenena ity raharaha fakana an-keriny an’i Arnaud sy i Annie ity. Niafara tamin’ny fandrahonana mpanao gazety sy fiakatrana hatreny amin’ny tribonaly mihitsy ity raharaha ity.
Isan’ny nahazo vahana tamin’iny taona 2016 iny, ankoatra ny fitsaram-bahoaka, ny fakana an-keriny. Lasibatra ihany koa ny teratany karana. Olana matetika ny tsy fisian’ny fiaraha-miasa eo amin’ny fianakavian’ilay olona sy ny mpitandro filaminana, araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra ambony iray eo anivon’ny mpitandro filaminana. Voalaza kosa fa na tsy mametraka fitoriana eny amin’ny mpitandro filaminana aza ny fianakavian’ireny teratany vahiny misy maka an-keriny ireny, manao ny asany amin’ny fanenjehana sy ny fikarohana ny jiolahy tompon’antoka amin’ny fakana an-keriny hatrany ny mpitandro filaminana.